Gaaritaan si aad uga caawiso ganacsiyada maxalliga ah inay helaan macaamiil badan | Martech Zone
Ganacsiyada maxalliga ah ayaa luminaya ku dhowaad saddex meelood meel hoggaankooda sababo la xiriira daadadka ku yimid iibkooda iyo habka suuqgeynta. Xitaa haddii ay ku guuleystaan ​​inay macaamiisha ku gaadhaan khadka tooska ah, ganacsiyada badani ma laha degel loo dhisay inuu beddelo hoggaamiyeyaasha, ha ula socon raadadka si dhakhso ah ama joogto ah, hana garanaynin ilaha suuqgooda ka shaqeeya.
Gaaritaanka, Nidaam suuq geyn isku dhafan oo ka socda ReachLocal, wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada inay baabi'iyaan qulqulatadan suuqgeynta qaaliga ah iyo inay macaamiil badan ku kaxeeyaan masafka iibkooda. Nidaamkan, ganacsatadu waxay leeyihiin qalab iyo taageero ay u baahan yihiin si ay uga helaan ROI badan kharashka suuqgaynta.
Gaaritaanka wuxuu shaqeeyaa dhammaan howlaha suuq-geynta saddex walxood oo asaasi ah: degel deg deg ah, softiweer maareynta maareynta iswada, iyo barnaamij mobiil awood leh oo dhammaantood wada shaqeeya si loogu beddelo rajada macaamiisha.
Gaaritaanka softiweerku wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada maxalliga ah inay soo qabtaan hoggaanno badan, u beddelaan macaamiil iyo inay fahmaan xeeladaha suuqgeynta ee soo saara hoggaamiyeyaasha / macaamiisha ugu badan iyo ROI. Astaamaheeda muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Tiknoolajiyada raadraaca Lead iyo wac taasi waxay ku qabataa hogaaminta isha suuq geynta; diiwangelinta wicitaanada waxayna u ogolaaneysaa ganacsiyada inay dib u ciyaaraan, qiimeeyaan oo ay ka jawaabaan tilmaamaha; abuuraa liis hoggaamineed mudnaan leh oo kaydiya faahfaahinta xiriirka sida magaca, cinwaanka iimaylka, goobta ganacsiga, lambarka taleefanka, maalinta iyo waqtiga wicitaanka, iyo duubista wicitaan ee xiriir kasta; waxayna la socdaan natiijooyinka ka soo baxa ololeyaasha 'ReachLocal' iyo 'non-ReachLocal'.
Qalabka moobaylka iyo digniinta in ay ogeysiiyaan ganacsiyada mar kasta oo ay xiriir cusub ka helaan degelladooda; abaabulaa oo marin u maraa iyadoo ku saleysan juqraafi, xafiis iyo / ama shaqaale; waxay ku siisaa warbixin kooban oo ku saabsan ilaha hogaanka sare iyo heerka kaqeyb galka hogaaminta cusub; waxay u oggolaanaysaa ganacsiyada inay u eegaan liisaska hoggaaminta mudnaanta leh, cusboonaysiiyaan macluumaadka xiriirka, dhagaystaan ​​wicitaannada la duubay oo ay u kala saaraan xiriirada kooxo; waxayna bixisaa kala-saarid hal-taabasho ah oo ku saabsan tilmaamaha cusub ee bilaabaya kobcinta e-maylka hoggaaminta iyo ogeysiisyada la socoshada shaqaalaha.
Ogeysiisyada hogaaminta iyo kobcinta kaas oo bixiya ogeysiisyo moobiil ah (SMS iyo in-app) ah si loo xusuusiyo milkiileyaasha ganacsiyada iyo shaqaaluhu inay la socdaan tilmaamaha; emayl maalin kasta dheefshiidka dhammaan xiriirada cusub iyo hoggaanka sare; iyo emayllo isdaba-joog ah oo suuq-geyn otomaatig ah oo ka caawiya ganacsiyada inay ku sii jiraan hoggaankooda.
Warbixinta iyo fikradaha ROI ee bixiya helitaanka 24/7 ee ganacsiyada iyada oo loo marayo boggooda internetka iyo barnaamijka moobiilka; warbixinno ilo ah oo muujinaya ilaha suuqgeynta ee booqashooyinka, xiriirada iyo tilmaamaha; aragtida waqtiga ee dhammaan xiriirada cusub, oo ay kujirto markii taleefan kasta la waco, emayl ama foomka soo gudbinta webka la helo; warbixinnada isbeddelka ee muujinaya maalmaha iyo waqtiyada saxda ah ee xiriirku dhacayo; warbixinnada hawlgelinta ee muujinaya sida wanaagsan ee ganacsiyada ugu beddelayaan xiriiro cusub hoggaamiyeyaal iyo macaamiil; iyo dakhliga macaamilka ee la qiyaasey oo muujinaya ganacsiyada suuq geyntooda ROI.
Khubaro Suuq geyn ka ah ReachLocal kaas oo bixiya dejin dhammaystiran oo ah barnaamijka 'ReachEdge' iyo la-qabsiga websaydhada ganacsiga; dejinta iyo qaabeynta digniinta xiriirka cusub iyo ogeysiisyada shaqaalaha; dejinta xiriir-otomaatig ah oo cusub iyo hoggaaminta emailada kobcinta; iyo dib u eegista warbixinnada iyo talooyinka lagu hagaajinayo websaydhka iyo waxqabadka suuqgeynta internetka.
Tallaabadeenna aan ugu diyaarinayno ReachEdge degel kasta waxay qayb ka tahay istiraatiijiyad ballaaran oo lagu hubinayo in suuqgeynta qadka toos looga heli karo, daah furnaan iyo fudeyd u leh ganacsiyada maxalliga ah. Sharon Rowlands, CEO, ReachLocal
ReachLocal, Inc. waxay ka caawisaa ganacsiyada maxalliga ah inay koraan oo ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan ganacsigooda iyagoo wata tikniyoolajiyad hoggaamineed iyo adeeg khabiir ku ah macaamiishooda jiilka hoggaaminta iyo beddelaadda ReachLocal waxay xarunteedu tahay Woodland Hills, Calif. Waxayna ka hawlgashaa afar gobol: Aasiya-Baasifik, Yurub, Latin Ameerika iyo Waqooyiga Ameerika.
Tags: baabuurtadaryeelka caafimaadkaadeegyada gurigasoo galidmaxaliga ahGanacsiga maxaliga ahsuuq geynta maxalliga ahSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkabogga mobiladaadeegyo xirfadeedgaadheyisweydaarsisuuqgeynta gobolkaadeegyada gaarka ah